Feo Vaovao Nandritra ny Blog Action Day 2013 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2013 21:00 GMT
Anivon'ireo mpitoraka bilaogy an'arivony namoaka lahatsoratra mikasika ny Zon'olombelona nandritra ny Blog Action Day ny 16 Oktobra 2013, nandray anjara tamin'ilay ezaka ireo tohanan'ny Rising Voices, na taloha na ankehitriny. Manantena ny Blog Action Day fa “hampiray ireo mpitoraka bilaogy erak'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny famoahana lahatsoratra mikasika ny lohahevitra iray iombonana, mandritra ny andro iray, ho fanairana sy hahatonga adihevitra tsara erak'izao tontolo izao…”
Ny Amigos de Januaría [pt], tetikasa iray notohanana tamin'ny 2011, dia mitatitra ny vaovao mikasika ny governemanta ao amin'ny tanànan'i Januária, Brezila. Nandray anjara tanatin'ny Blog Action Day izy ireo miaraka aminà lahatsoratra iray momba ny lanjan'ny Zon'olombelona izay mifandray amin'ny zo hahazo fampahalalam-baovao momba ny governemanta iray ao an-toerana:
Zo iraisam-pirenena ny fifidianana ireo olom-boafidin'ny firenena, torak'izany ihany koa ny fahazoana fampahalalam-baovao momba ny governemanta iray nampianao hisafidy… Ohatra, nahamarika izahay fa sarotra ny mahazo vaovao natao ho an'ny rehetra, na dia misy aza ny lalàna mangataka ny hamoahana izany. Ny doka sa ny maha-tomponandraikitra no tian'ireo governemanta? Mila miady isika mba hahatratrarana tokoa izany zo izany. Dia ny zo hahazo fampahalalam-baovao!
Fitsidihan'ny “Mapping for Niger” (Mametraka an'i Nizeria ho anaty sarintany) ny Timidria
Nizara lahatsoratra iray niarahana nosoratan'i Orsolya Jenei, Fatiman Alher ary Tanimoune Mossi Garba ihany koa ny tetikasa tohanan'ny RV amin'ity taona ity, ny Mapping for Niger, izay miresaka indrindra momba ny fanandevozana amin'ny endriny vaovao misy ao Nizeria amin'izao fotoana. Ho fanomanana io hetsika io, nitsidika ny Timidira ilay ekipa, izay fikambanana Nizeriana miasa ho famongorana ny fanandevozana, ary avy eo dia nametraka io fikambanana io anatin'ny OpenStreetMap ho ampahany amin'ny tetikasan'izy ireo. Nangataka ny fihetsehana avy hatrany avy amin'ireo Nizeriana mpanao politika io lahatsoratra io.
Mbola mitohy ny fampiharana [ny fanandevozana] noho ny tsy firaharahiana ny zon'olombelona sy ireo adidin'ny olom-pirenena. Ny tsy fitoviana ara-piarahamonina, sy ny famolavolaina ny sain'olona amin'ny alalan'ireo hevi-diso mikasika ny kolontsaina na ny fivavahana dia namela ny fanandevozana hiraikitra anatin'ny fiarahamonina hatramin'ny vanim-potoana fanjanahantany na teo aza ny ezak'ireo fikambanana sy fikambanambe samy hafa hiady amin'izany. Matetika ihany koa ireo andevo no mandray ny tompony ho “andriamanitra kely eto an-tany”… hany ka mijanona sy manaraka ireo fitsipika napetraka izy ireo… Ny hany azo atao dia ny manantena fa ho tonga saina ny amin'izany ireo mpanao politika ary hanao izay ho afany mba tsy hahataraiky ny famahana ity olana ity, sy hiasa hanafaingana ny famahana ity henatra lehibe eto amin'ny firenena ity.
Mpikambana roa avy ao aminà tetikasa iray hafa notohanan'y RV teo aloha – ConVerGentes, izay namorona ny ampahan'ny tetikasa HiperBarrio avy any Medellín Colombia no niresaka mikasika ny zon'olombelona tahaka ny hita any amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana, any La Loma, izay ivondronan'ny tanora anatin'ny famakiam-boky ao an-toerana hitantara ny momba ny manodidina azy ireo. Manontany i Lady Carpe Diem, mpitoraka bilaogy : “Ahoana no hahafahantsika miresaka momba ny (zon'olombelona), raha mahatoran-kovitra antsika ny tahotra ary raha very rariny ireo andrim-panjakana?[es]“
Argos, mpitoraka bilaogy koa, dia mampahatsiahy lahatsoratranà bilaogy iray navoakan'i Akenaton [es], mpanakanto iray avy ao La Loma, izay nanoratra tononkalo mikasika ny mponina iray ao an-toerana, Teresa. Nitsoahan'ireo mpiara-monina hafa izy noho ny aretin-tsainy, izay mety nitranga taorian'ny loza mahatsiravina namoizany ny zanaky ny iray tampo aminy, izay noahiany sy noraisiny tahàka ny zanaka naterany. Tsy nahazo nivoaka ny tranony i Teresa, hetsika iray tsy nanaja ny zony amin'ny maha-olombelona azy, ary tanatin'ny fahanginana no nandaniany ny andro sisa niainany. Tahaka izao ny fanombohan'io tononkalo io:
Vavy antitra mampalahelo ! voahidy anatin'ny tranony.
Voahidy anatin'io trano ntaolo io izy ankehitriny, trano izay nanjakany fahiny.
Nefa akory atao ankehitriny?… izany no fandehan-javatra anatin'io vohitra io.
Hitanao mitsikilo ivelan'ny varavarankeliny isanandro izy;
tahaka ny hoe hajia izany, tahaka ny sary hosodoko;
tahaka ny tsy inona tsy inona,
Ny masony malahelo sy ny volony mirakorako;
Ireo tànany antitry ny andro lasa, manozongozona ireo vy manidy azy.
Maro ireo lahatsoratra nozarain’ireo mpanoratra avy ato amin'ny Global Voices, ary azonao arahina ireo tenifototra Twitter #BAD13, #HumanRights ary #Oct16.